Eco Woman Page
Movies mahakasika ny psyche
Raha vao mijery kalitao tena tsara asa fanompoana sy mahatalanjona feonkira nivoaka avy tao amin`ny teatra (na fotsiny manakatona ny kiheba eo amin`ny solosaina), ianao mahatsapa ho toy ny, mba nataony malemy fanahy, hafahafa izany ka hanao hoe: "eo ambany fitarihan`ny".
Ny mpanjakavavy avy manafintohina izao tontolo izao ny avo lamaody, ny malaza anglisy mpamorona Vivienne Westwood dia nekena ho iray amin`ireo endrika manan-talenta indrindra tamin`ny taonjato faha-20.
Ahoana no hamantarana ny tsvetotip?
Ny teny hoe "tsvetotip niseho" mandra-pahatongan`ny vao haingana ihany no fantatry ny hairdressers, makiazy mpanakanto sy ny matihanina stylists.
volony - mahatonga
Tamin`ny andro fahiny, mpanasitrana no nangataka ireo marary mba hampiseho ny fiteny avy eo vao - mba lisitra ny soritr`aretina.
mientana amin`ny psikolojia
Ny fivoaran`ny olombelona mahatsiaro tena no betsaka tapa-kevitra ny sokajy ny asa ao amin`ny psikolojia ny olona, ​​raha tsy izay tsy misy azo atao ny mandinika hafa rehetra ara-drafitra endrika tena tapa-kevitra ny olona sy ny fifandraisany amin`ny tontolo iainana, indrindra indrindra, ny fifandraisana amin`ny fiaraha-monina sy ny ara-tsaina taratry ny tenany amin`ny isan-karazany sehatra ny fiainana.
fohy haircuts 2013
Taloha, fohy bolo ho an`ny vehivavy tsy mbola nisy mihitsy aza niely, ary voarara, na inona na inona ny tsy mendrika sy firaisana eo amin`ny fiaraha-monina.
Smecta - ny fomba fampiasana
amin`ny vanin-taona mafana, ny ankamaroan`ny olona, ​​na haka aina mandeha amoron-dranomasina.